Kooxda Manchester United oo shaacisay lambarrada ay u xiran doonaan saxiixyadeeda cusub ee Daniel James iyo Aaron Wan-Bissaka – Gool FM
(Manchester) 01 Luulyo 2019. Kooxda Manchester United ayaa ku dhawaaqday lambarrada ay xiran doonaan saxiixyadeeda cusub ee Daniel James iyo Aaron Wan-Bissaka.
United waxa ay shaacisay in Aaron Wan-Bissaka oo ay kala soo wareegeen naadiga Crystal Palace uu u xiran doono lambarka 29-aad, halka saxiixeeda cusub ee Daniel James oo ay kala soo wareegeen Swansea City uu u xiran doono lambarka 21-aad.
Bayaan ay kooxda Man United soo dhigtay website-keeda rasmiga ah ayey ku xaqiijisay in Daniel James uu qaadan doono lambarka 21-aad ee kooxda, halka daafaca Aaron Wan-Bissaka uu xiran doono lambkar 29-aad.
Da’yarka xulka qaranka Wales ayaa lambarkan ka dhaxlay Ander Herrera, kaasoo kooxda horay ugu sugnaa muddo shan sano ah, laakiin marka uu qandaraaskiisu dhacay isaga tagay.
James ayaa Man United kaga soo biiray bishii hore naadiga Swansea City, waxaana uu qalinka ku duugay heshiis shan sanadood ah.
21-sano jirkaan James ayaa noqon doona ciyaryahankii todobaad ee lambarka 21-aad u qaata kooxda Manchester United, kaddib Ander Herrera, Rafael da Silva, Dong Fangzhuo, Diego Forlan, Henning Berg iyo Pat McGibbon.
Arsenal oo soo bandhigtay maaliyadda ay xiran doonto marka ay gurigeeda ku ciyaarayso fasal ciyaareedka cusub ee 2019/20… + SAWIRRO